MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » U Myo Aye presented his Credentials to His Excellency Mr. Andrej Kiska, President of the Slovak Republic
U Myo Aye presented his Credentials to His Excellency Mr. Andrej Kiska, President of the Slovak Republic
by adminmofa on 08/03/2017 at 8:42 PM
U Myo Aye, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Slovak Republic, presented his Credentials to His Excellency Mr. Andrej Kiska, President of the Slovak Republic on 1 March 2017, in Bratislava.
Dated. 8 March 2017
ဆလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးအေးသည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဘရာတစ်ဆလာဗာမြို့၌ ဆလိုဗက်သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ အန်းဒရစ် ကစ္စကာ ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်